Home Wararka Tehraan oo mar labaad waaran xarig ah u jartay Donald Trump
Tehraan oo mar labaad waaran xarig ah u jartay Donald Trump
Dowladda Iiraan ayaa hay’adda booliska caalamiga ah ee Interpol waxay ku wargelisay xariga madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump.
Afhayeenka garsoorka Iran, Gholamhossein Esmaili, ayaa ku dhawaaqay in Iran ay ka codsatay booliska caalamiga ah inay soo xiraan Trump iyo 47 sarkaal oo kale oo Mareykan ah oo ay u aqoonsatay inay door ku lahaayeen dilkii Jeneraalkii ugu sareeyay waddanka ee Qassem Soleimani kaasoo la dilay sanadkii hore.
“Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan waxay si dhab ah ula socotaa dabagalka iyo ciqaabta kuwa amray oo fuliyay dambigan,” ayuu Esmaili u sheegay suxufiyiinta.
Soleimani, Jeneraalkii ugu awooda badnaa Iran isla markaana hogaaminayay waaxda arrimaha dibadda ee sirdoonka dibadda Jamhuuriyadda Islaamiga ah, waxaa la dilay 3-dii Janaayo, 2020 kadib duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ay ka geysteen garoonka diyaaradaha caasimadda Ciraaq ee Baqdaad.
Dilka ayaa waxaa loo arkaayey inuu ka soo horjeedo sharciga caalamiga ah ee Qaramada Midoobay kuna saabsan xukun aan sharci ahayn ama xukun bilaa sabab ah.
Waa markii labaad ee Iiraan ay codsato in lasoo xiro Trump iyo mas’uuliyiin oo Mareykan ah oo ka tirsan Waaxda Gaashaandhiga Mareykanka, taliska dhexe ee ciidamadda milatariga Ameerika iyo xulafadda Washington.
Bishii Juun, dacwad oogaha Tehran Ali Alqasimehr wuxuu soo saaray waaran qabasho oo ka dhan ah Trump iyo tobanaan saraakiil Mareykan ah oo uu sheegay in ay wajahayaan “eedo dil iyo argagixisanimo”.
Balse Interpol oo fadhigeedu yahay Faransiiska ayaa diiday codsigii Iran, waxayna sheegtay in xeerkeeda uu ka mamnuucayo inay sameyso “faragelin kasta ama dhaq dhaqaaq siyaasadeed, mid militari, mid diimeed ama midab midab”.
Wadahadalada dib loo cusbooneysiiyay ee ku saabsan dacwad kusoo oogista Trump iyo saraakiisha kale ee Mareykanka ayaa qeyb ka ah balanqaadyadii Iran ee ahaa inay u aargudi doonaan Soleimani oo hal sano ay kasoo wareegatay dilkiisa.
Si lamid ah waxay timid xilli Trump ay maalmo yar uga hartay joogitaankiisa xafiiskiisa taasoo ah fursad ay Iran u aragto fursad ay ciqaabteeda ku marin karto.